Apple TV +: wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato Apple ee adeegga fiidiyowga ee soo dejinaya ee cusub | Wararka IPhone
Apple TV +: wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato adeegga fiidiyowga cusub ee fiidiyowga ee Apple
Tan iyo bishii Nofeembar ee la soo dhaafay, soo bandhigida adeegyada fiidiyowga ayaa heshay tartan cusub oo ka socda Apple iyada oo loo marayo Apple TV +, sidaas darteedna ku darista dalabyada kala duwan ee aan hadda ku hayno HBO, Netflix badanaa ... iyo kuwa 12-ka bishaan Disney + ayaa ku biiri doonta, inkasta oo markii hore dalal kooban.
Tan iyo markii Apple ay shaacisay Apple TV + bishii Maarso ee la soo dhaafay, waxaa jiray warar badan oo la xiriira adeegan oo ku saabsan taxanaha horeyba loo heli jiray iyo kuwa imaan doona bilaha soo socda. Hadaad rabto inaad ogaato labadaba taxane ah oo la heli karo maanta oo ah soo-saarka soo socda iyo qiimaha adeeggan, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
1 Apple TV-ga hadda + Kaatalogga
1.1 Bandhigga Subaxa
1.3 Aadmiga oo dhan
1.5 Qoraa cirfiid
1.7 Ku dhex foorarsho meel bannaan
1.8 Boqoradda maroodiga
2 Sii deynta soo socota ee Apple TV +
2.2 Runta sheeg
3 Tayada adeegga
4 Xagee ka daawan karaa Apple TV +
5 Immisa ayuu ku kacayaa Apple TV +
Apple TV-ga hadda + Kaatalogga
Bandhiga Subaxnimadu wuxuu ina tusayaa waxa daaha gadaashiisa ka maraya iyada oo loo marayo bandhig telefishan oo subaxnimo ah halkaasoo mid ka mid ah martida loo ahaa, Steve Carell, shaqada laga eryay sanado badan ka dib isagoo marti u ahaa showgii subaxnimo oo uu weheliyo Jennifer Aniston. Tixdu waxay siisaa riwaayad, daacadnimo iyo aragti furan oo ku saabsan xiriirka shaqaalaha casriga ah.
Bilowgii saddexda qaybood ee hore ayaa la heli karaa oo ka mid ah tobanka ka kooban xilli ciyaareedkii ugu horreeyay.
Falanqeeyayaal: Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon iyo Steve Carell.
Fayras indho la'aan ah ayaa baabi'iyay aadanaha. Baba Vox (Jason Momoa) waa aabaha laba mataano ah oo ku dhashay awood ay wax ku arkaan qarniyo kadib. Caawinta Paris (Alfre Woodard) wuxuu beeshiisa ka ilaalin doonaa boqorada arxanka daran ee doonaysa inay disho.
Falanqeeyayaal: Jason Momoa, Sylvia Hoeks iyo Alfre Woodard.
Aadmiga oo dhan
Aadanaha oo dhan wuxuu ina tusayaa sida taariikhdu ahaan laheyd hadday Ruushku ahaan lahaayeen kuwa ugu horreeya ee dayaxa gaadha maadaama tartankii boosku uusan dhammaan lahayn. Tixdu waxay ina tusaysaa nolosha shaqsiyeed iyo xirfadeed ee halyeeyada, loo tixgeliyey geesiyaal waqtigaas.
Falanqeeyayaal: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt
Emily Dickinson, waxaa jilay Hailee Steinfeld, waa qof caasi ah oo dooneysa noqo gabayaaga ugu fiican aduunka adigoon wax walba kahor istaagin iyo cidna.
Si ka duwan labadii taxane ee hore, Apple ayaa na siisa dhammaan xilli ciyaareedkii ugu horreeyay waxaa qoray Dickinson, oo ah 10-dhacdo oo taxane ah xilli ciyaareedkeedii ugu horreeyay.
Falanqeeyayaal: Hailee Steinfeld, Toby Hus iyo Jane Krakowski.
Qoraaga cirfiidka wuxuu ka kooban yahay 4 caruur ah oo isku duuban si ay u xaliyaan qarsoodi ku saabsan rooxow oo leh arrimo aan xal loo helin iyo inuu ku dhuumaaleysto dukaanka buugaagta ee xaafadda oo ku sii deynaya astaamo khayaali ah dunida dhabta ah.
Bilowgii toddobada qaybood ee ugu horreeya ayaa la heli karaa ka kooban xilli ciyaareedkii ugu horreeyay.
Qaybinta: Isacc Arellanes, Amadi Chapata iyo Hannah Levinson.
Cody iyo Caawiyayaashu oo wata koox wuxuush yaryar ah oo jecel xallinta dhibaatooyinka, wax walba wuu sameyn karaa, ha ahaato abaabul xaflad, fuulitaanka buur, barashada xeelad sixir ... Markii hore waa la heli karaa 6dii qaybood ee ugu horreeyay xilli ciyaareedkii ugu horreeyay.
Ku dhex foorarsho meel bannaan
Snoopy wuxuu fuliyaa riyadiisa ah noqo cirbixiyeen ka tirsan NASA isla markaana u safra hawada sare. Laga soo bilaabo gacanta Carlitos, wuxuu la wareegayaa amarka Saldhigga Caalamiga ee Hawada si uu ugu dhowaado booska uu doonayo inuu si qoto dheer u baadho.
Bilowgii laba iyo tobanka qaybood ee ugu horreeya ayaa la heli karaa sameyso xilli ciyaareedkii ugu horreeyay.
Documentary muujinaya Athena, oo ah maroodi raxan maroodiyaal ah oo raadinaya ilo biyo ah oo dhex mara dhulalka Afrika. Documentary-ga wuxuu socdaa 1 saac iyo 36 daqiiqo.
Sii deynta soo socota ee Apple TV +
M. Night Shyamalan wuxuu ka dambeeyaa kaamirooyinka Servan wuxuuna na tusayaa sheekada lamaane ku nool Philadelphia oo ay soo gaareen ilmahooda yar, xaalad sababi karta fogaanta guurka halka fur albaabada guriga xoog qarsoodi ah.
Qaybinta: Lauren Ambrose, Toby Kebbell iyo Rupert Grint
Riwaayad inagu mashquulinaysa adduunka Podcasts dambiyada runta ah oo uu jilayo Octavia Spencer, oo lagu qasbay dib u fura dacwadii dilka ee caan ku noqotay iyo wajiga kuwa gadaal ka dhigay baararka, doorka uu jilayo Aaron Paul.
Qaybinta: Octavia Spencer, Aaron Paul iyo Lizzy Caplan
Filim na tusaya sheekada Hala (waxaa ciyaaray Geraldine Viswanathan), waa arday 17 sano jir ah oo u halgameysa inay hesho isku dheelitirnaanta ubad ahaaneed xaafad xaafadeed iyo u hogaansanaanta waxbarashada muslimiinta ee ay heshay tan iyo yaraanteeda. Filimkan waxaa xushay Sanadka Filimka Sundance iyo Bandhigga Filimka ee Toronto sannadkan.
Qaybinta: Geraldine Viswanathan, Jack Kilmer iyo Gabriel Luna.
Dhamaan taxanaha waxaa lagu heli karaa tayada 4k dhammaan qalabkaas la jaan qaadaya muuqaalkan fiidiyowga ah, laakiin sidoo kale waxaa lagu heli karaa HD. Codka taxanaha oo dhami waa Isbaanish sidoo kale wuxuu naga dhigayaa qashinkeena subtitles oo ku qoran luqado tiro badan, oo ay ku jiraan Isbaanish.
Dadka leh dhibaatooyinka marin-u-helka, Apple TV + wuxuu na siiyaa sharaxaad maqal ah, waddo sheeko oo sharraxaysa waxa ka dhacaya shaashadda si loo siiyo macluumaadka macnaha guud indhoolayaasha ama araga naafada ka ah.
Xagee ka daawan karaa Apple TV +
Bilowgii sanadka 2019, afar shirkadood oo telefishano ah ayaa shaaciyey inay heshiis la galeen Apple si ay ugu soo bandhigaan moodooyinkooda AirPlay 2, HomeKit, marin u helida filimaanta iTunes…
Apple TV 3, Apple TV 4 iyo Apple TV 4k
Adoo adeegsanaya biraawsar shabakad ka socota Mac ama PC adoo booqanaya webka tv.apple.com
iPhone, iPad, iPod taabashada
LG NanoCell SM9X taxane (2019)
LG NanoCell SM8X taxane (2019)
LG UHD UM7X taxane (2019)
Taxanaha Samsung QLED (2019 iyo 2018)
Samsung 8 Taxanaha (2019 iyo 2018)
Samsung 7 Taxanaha (2019 iyo 2018)
Samsung 6 Taxanaha (2019 iyo 2018)
Samsung 5 Taxanaha (2019 iyo 2018)
Samsung 4 Taxanaha (2019 iyo 2018)
Taxanaha Sony Z9G (2019)
Taxanaha Sony A9G (2019)
Taxanaha Sony X950G (2019)
Taxanaha Sony X850G (2019 85 ″, 75 ″, 65 ″ iyo 55 ″)
Quantum Vizio P-Series (2019 iyo 2018)
Vizio P-Series (2019, 2018 iyo 2017)
Vizio M-Series (2019, 2018 iyo 2017)
Vizio E-Series (2019, 2018 iyo 2017)
Vizio D-taxanaha (2019, 2018 iyo 2017)
Immisa ayuu ku kacayaa Apple TV +
Apple waxay bixisaa lacag hal sano ah Apple TV + dhamaan isticmaaleyaasha soo iibsaday iPhone, iPad, Apple TV, iPod taabashada ama Mac laga bilaabo Sebtember 10. Haddii aadan cusboonaysiin qalabkaaga ama aad qorsheyneyso inaad sidaas sameysid bilaha soo socda, Apple waxay na siisaa laba nooc oo rukun ah: bille iyo sanadle.
Diiwaangelinta billaha ah waxay leedahay qiimo dhan 4,99 euro, halka midka sanadlaha ah uu u kaco 49,99 euro, oo noo ogolaanaya badbaadi rukunka laba bilood haddii aan bixinno sanadka oo dhan ee diiwaangelinta.
Haddii aan nahay isticmaaleyaasha adeegga muusikada ee qulqulaya ee Apple ee ardayda, oo qiimahoodu yahay 4,99 euro, Apple wuxuu u oggolaanayaa dhammaan dadka isticmaala heerkan Apple Music.c u hel dhammaan waxyaabaha ku jira Apple TV + bilaash adigoon bixin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple tv » Apple TV +: wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato adeegga fiidiyowga cusub ee fiidiyowga ee Apple
Ka sokow in cutubka koowaad ee Dhammaan Bini-aadamka loo higgaadiyay, gabal gabal dhac ah. Fadlan, ka qaado tan Ruushka taas oo ah waxa aan cidna fileynin bilowga dhacdada oo ka tag sharaxaadda sida qof walba u sameeyay, taas oo muujineysa taas, waxa dhici lahaa haddii tartanka booska uusan dhammaan lahayn.
Adobe Photoshop wuxuu yimaadaa iPad-ka. Hadda waxaad kala soo bixi kartaa Photoshop buuxa oo loogu talagalay macruufka
Kudar kumanaan nooc oo ah iPhone-kaaga iyo iPad-kaaga adoo adeegsanaya Adobe Creative Cloud